युरोपियन युनियन र प्रचण्डबिच भेटवार्ता,बाँदरमुढे घटनाबारे सोध्दा प्रचण्डको जवाफ के आयो ? - samayapost.com
बुधबार, १९ फागुन २०७७
युरोपियन युनियन र प्रचण्डबिच भेटवार्ता,बाँदरमुढे घटनाबारे सोध्दा प्रचण्डको जवाफ के आयो ?
समयपोष्ट २०७४ मंसिर १४ गते ५:५५
युरोपियन युनियन इलेक्सन अब्जरभेसन मिसन, नेपालको लरेन्स कार्लियर नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् । चितवन शिवनगरस्थित प्रचण्ड निवासमा टोलीले दाहालसंग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा टोलीले जनयुद्धको क्रममा चितवनकै बाँदरमुढेमा भएको घटनाबारे प्रश्न सोधेको थियो । जवाफमा दाहालले बाँदरमुढे घटना युद्धको समयमा भएको ठूलो र निकै दुखद घटना भएको र यसबारेमा छानबिन गर्न सत्य निरुपण आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए । आयोगले आवश्यक र सही निर्णय गर्नेछ भन्नेमा आफु विश्वस्त रहेको उनको धारणा थियो ।
निर्वाचनको समयमा तपाइँलाई कतैबाट सुरक्षा थ्रेट आएको छ कि छैन भन्ने टोलीको अर्को प्रश्नमा दाहालले त्यस्तो थ्रेट कतैबाट नआएको बताए । टोलीले तपाईं सहभागी निर्वाचन सभाहरुमा बढी मानिसको उपस्थिति देखिन्छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने,'चितवन मेरो जिल्ला हो । मेरो जन्मस्थान हो । म पढेको, हुर्केको जिल्ला हो । मलाई चितवनबासीले मायाँ गर्नुहुन्छ । कुनै दल विशेष मात्र भन्दा पनि सम्पूर्ण (दलका) चितवनवासीले मलाई साथ दिनुहुन्छ' ।
यसैगरी यस निर्वाचनमा तपाइंको प्रतिस्पर्धा कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ? भन्ने टोलीको जिज्ञासामा दाहालले समग्र चितवनको विकासको लागि चितवनवासीले आफुलार्इ विश्वास गर्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धी कोहीनै नभएको बताए ।
सरकारसँग वार्ता गर्न विप्लवको तर्फबाट प्रकाण्डसहित २ सदस्यीय टोली घोषणा
राजश्व छली नियन्त्रण : ४७ अर्बको आर्थिक अपराध, एक हजारविरुद्ध मुद्दा
अरुको ब्राण्ड चोरी गर्ने देखि मूल्य सूची नराख्नेसम्म, एक सय फर्मलाई ३० लाख जरिवाना
झापा पुगे प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गर्ने
ताप्लेजुङ दोभान बजारमा भीषण आगलागी : ३५ घर जलेर नष्ट
चार वर्षमा पनि सकिएन नक्खु–बुङ्मती सडक, तत्काल बढाउन नसकिने भएपछि आधा चौडाइमै कालोपत्रे गर्ने तयारी
गोदावरीमा फोहरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिने
भागरथी हत्याको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा
सांसद र मन्त्रीहरुले भोलि कोभिड १९ बिरुद्धको खोप लगाउने
बिएण्डसी टिचिङ हस्पिटललाई सम्बन्ध दिने तयारी छः प्रम ओली
ट्याङ्कीमा पाइपलाइन जडान गरेर पेट्रोलियम पदार्थको अपचलन, एक हजार ट्याङ्करमाथि कारवाही
न्यायाधीशकी श्रीमती, ओली समुहकी केन्द्रीय सदस्य ब्राउनसुगरसहित पक्राउ
सिप्रदी ट्रेडिङका निर्देशक राणाको निधन
कोभिडले बीमालाई ग्रामीणस्तरसम्म चिनायो
महामारीले जीवन बीमाको आवश्यकता महसुस गराएको छ